Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fizahan-tany sy patematika: miara-miaina ve izy ireo? » Page 4
Lalana be vato eo alohan'izay
Ny Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dia manombana ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia hidina eo amin'ny 80 isan-jato amin'ity taona ity (2020) ary tsy hisy fanarenana misy dikany amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena hatramin'ny faramparan'ny taona 2021; ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran-tany (UNTO) dia tsy mahita sitrana raha tsy amin'ny 2023.
Ny tetik'asa OECD dia ny tetik'asa fizahan-tany maharitra dia ahitana:
1. Faharetana. Mety ho lasa zava-dehibe kokoa izany amin'ny fanekena bebe kokoa ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiantraikany amin'ny fizahan-tany.
2. Faritra voajanahary. Ny toerana itodiana any amin'ny faritra sy eto an-toerana ary any ambanivohitra dia toa mitarika ny fanarenana.
3. Halaviran'ny fiara. Ny halaviran'ny dia lavitra dia mety hiteraka fihenan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana.
4. Fizahan-tany any an-toerana. Ny fieritreretana manerantany sy ny fihetsika eo an-toerana dia mety hitombo; na izany aza, ireo mpizahatany ireo dia mety ho mora tohina amin'ny vidiny ary ambany ny fomba fandaniany.
5. Tsy fahatokisan'ny mpitsangantsangana. Ny risika sy ny tebiteby dia mety hiteraka fihenan'ny fangatahana sy ny fanjifana ny fizahan-tany.
6. Fitondra-dia. Ny fiovan'ny toe-tsaina manoloana ny traikefa an-dia dia mety hiteraka tsena vaovao miaraka amin'ny fanamafisana bebe kokoa ny fiarovana fiarovana sy ny traikefa fizahan-tany tsy misy fifandraisana.
7. Fiarovana sy fahadiovana. Ireo lafin-javatra lehibe amin'ny fisafidianana ireo toerana itodiana sy hetsika misy ny fahasalamana sy ny fiadanam-po dia hahitana ny fifantohana amin'ny tsy miankina fa tsy ny zavatra iainana.
8. Jet / fiaramanidina tsy miankina. Hitombo ny olana ara-pahasalamana sy fiarovana amin'ny fampiasana fitaterana manokana.
9. Ny renivohitra sy ny fampiasam-bola. Ny fihenan'ny vola amin'ny hotely, ny fizahan-tany ary ny fizahan-tany dia hitohy hatramin'ny 2021 satria ny risika sy ny tsy fahazoana antoka dia ampahany amin'ny tsena manerantany.
10. Automation. Ny digitalisation amin'ny serivisy fizahantany miaraka amin'ny teknolojia bebe kokoa, ny fandoavam-bola ary ny serivisy, ny traikefa virtoaly ary ny fampahalalana amin'ny fotoana tena izy dia hampihena ny filan'ny mpiasa.
11. Politikan'ny fizahantany. Ny fitantanana ny krizy dia hifantoka amin'ny valinteny haingana kokoa ary hitaky ny fitantanana sy ny mpiasa handinika mialoha sy hanaraka haingana ny fanovana eo amin'ny tontolon'ny orinasa sy ny fiaraha-monina.
12. Fiantohana mandeha. Ireo mpitsangatsangana dia te hanana toky fa azo antoka sy voaro ny drafitra ataon'izy ireo ary ny mividy fiantohana ho an'ny dia ho lasa ampahany amin'ny drafitra mialoha ny dia.
Ity tontolon'ny post-COVID-19 ho an'ny mpandeha ity dia hanasongadinana ireo toeran-kaleha mahamora ny halaviran'ny fiaraha-monina. Tsena marobe, tranombakoka, kaonseritra, lobby hotely, seranam-piaramanidina, zotram-piaramanidina, sambo fitsangantsanganana - na aiza na aiza misy ny vahoaka, dia farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy, ho TO-TSIA. Ny zotran-tany dia hanao fandaharam-pivondronan'ny olona an-dàlana izay misy ny olona mandehandeha amin'ny alàlan'ny bus bus na miandry lava - hitsidika tsangambato; na izany aza, hisy ny fitomboan'ny fahalianana amin'ireo hetsika miavaka amin'ny akany, ao anatin'izany ny fijerena vorona, fitsangatsanganana bisikileta, ary ny zavatra ianarana (izany hoe, fisehoan-divay, kilasy fandrahoan-tsakafo) ahafahan'ny olona mifanalavitra.
Misy ny fangatahana maharitra amin'ny dia; ny fahavelomana dia miankina amin'ny fahatakarana sy ny famahana ny filan'ny mpanjifa, amin'ny fanekena fa, hoy i Walt Whitman, "Ny lasa dia prologue."
Page 4 ny 4 Prev Manaraka